Tag: otutu mmadu kwenyere | Martech Zone
Otu Mgbasa ozi si arụ ọrụ
Mgbe m na-enyocha isiokwu nke mgbasa ozi, emere m na infographic na Otu Mgbasa Ozi Si Eme Ka Anyị Zụrụ. Ihe omuma nke di n’okpuru n’emepee n’echiche na ndi kompeni bara uba ma nweko ego ma jiri ya megharia ndi na-ege ha anya. Echere m na nke ahụ bụ echiche na-enye nsogbu, ọdachi, na eleghi anya. Echiche mbụ nke naanị ụlọ ọrụ ndị bara ọgaranya na-akpọsa bụ echiche dị ịtụnanya. Companylọ ọrụ anyị abaghị ọgaranya ma, n'ezie, nwere di na nwunye
Enwere m olu olu banyere nlelị m na panacea kachasị ọhụrụ banyere etu esi ere ahịa na ntanetị. Ọ bụ ezie na m kwenyere na ndị na-eme ihe ike nwere oke iru ya na ụfọdụ mmetụta, ekwetaghị m na ha nwere ike nke ikwenye na-abụghị nke ihe ndị ọzọ. Marketingzụ ahịa ahịa na-achọ atụmatụ karịrị ịtụfu ụfọdụ tiketi na onye na-eme ihe ike ma ọ bụ na-echegharị. Dabere na Dr. Robert B. Cialdini, onye edemede nke Mmetụta: Sayensị na Omume (Agba nke 5), enwere m ike